Mgbe afọ 37 nke arụghị ọrụ gasịrị, NASA jisiri ike na ndị na-akwado Voyager 1 | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe afọ 37 nke arụghị ọrụ gasịrị, NASA jisiri ike gbaa ndị ọkpọ Voyager 1
Iji tinye anyị na gburugburu ya ntakịrị, tupu ị banye na nkọwa, m ga-achọ ikwu maka Njem 1, nke pụtara n'ụzọ nkịtị ihe mmadụ mere nke jisiri ike hụ ebe kacha anya n'akụkọ ihe mere eme. Anyị na-ekwu okwu n'ụzọ nkịtị gbasara nyocha nke taa dị n'akụkụ ebe dị 21.000 nde kilomita pụọ na Earthwa, nke pụtara na ngwaọrụ a bụ n'èzí ọbụna usoro mbara igwe.
Banye ntakịrị ntakịrị gbasara njirimara nke ọrụ ahụ, gwa gị ya emebere ya n’eluigwe n’afọ 1977 dị ka akụkụ nke otu n'ime ndị dị ebube na, taa, ama ochie ọzọ nke NASA. Echiche dị adị mgbe emechara Voyager 1 abụghị nke ọzọ jikwaa ịchọta ma mụọ njedebe nke usoro mbara igwe, otu na, laa azụ na 2014, a chọpụtara na ọ jisiri ike gaa njem n'èzí akara akara nke heliosphere, mpaghara nke gbatịrị gafere Pluto.
Na-agbaso nkọwa nke ejiri wuo Voyager 1 n'oge ahụ, anyị na-ekwu maka ihe eji arụ ọrụ nke nwere batrị plutonium nke putara na usoro iwu kwesịrị ịga n'ihu na-arụ ọrụ ruo 2025, n'oge nke ọ ga-akwụsị iziga data. Dịka nkọwa zuru oke, n'oge ahụ e nyere ya diski ọla edo nke nwere ụda na onyonyo nke ndụ n'elu ụwa, dị ka atụ anya ya, yabụ, ọ bụrụ na ụdị ndụ dị iche iche ejide ya ma ọ bụ gbochie ya, ha nwere ike ịhụ na enwere ọgụgụ isi ndụ n'ụwa.
1 Voyager 1 bụ ozi nke NASA mepụtara ebe ụlọ ọrụ ahụ nwere echiche nke ịmụ akwụkwọ mpụta nke mbara igwe
2 N'ihi ọrụ nke ndị na-agbazi trajectory, Voyager 1 ga-enwe ike ịga n'ihu maka afọ 2-3 ọzọ
Voyager 1 bụ ozi nke NASA mepụtara ebe ụlọ ọrụ ahụ nwere echiche nke ịmụ akwụkwọ mpụta nke mbara igwe
Otu n'ime Ihe ojoo nke ozi anyị chọtara ya na ikike ndị sayensị na ndị injinia metụtara ọrụ ahụ nwere ruo ugbu a ịkpọtụrụ ma nwee ike ịgwa Voyager 1 okwu, nyocha ahụ gara n'ihu, mkpa ọ dị iji akụrụngwa dị ike na ịrụ ọrụ nke ọma rụọ ọrụ. kpọtụrụ ya ọ dịwanye mkpa. Nsogbu a dugara n'eziokwu na n'ụzọ doro anya ebe ọ bụ na 1980 ya anọ nke abụọ thrusters-apụghị ọrụ, kpọmkwem ndị na-ahụ maka mgbazi trajectory. Ka oge a gasịrị, dịka NASA n'onwe ya si kọọ, ndị injinia ha jisiri ike rụọ ọrụ ndị a na, na mgbakwunye, ha enweela ike ịchọpụta na ha na-arụ ọrụ zuru oke.
Emere ihe a na Tuzdee gara aga, n'oge nke akara si na NASA. Cheedị ihe nwere ike ịgabiga n'isi ndị niile nwere ọrụ na-arụ ọrụ a na akụkọ ihe mere eme mgbe ha na-eche ihe ọbụla Nkeji 19 na 35 nkeji ruo mgbe ozi ahụ ruru nyocha na ndị ọzọ Nkeji 19 na 35 nkeji ruo mgbe ọ ga-ekwe omume ịbanye ozi nyocha ahụ nke nyocha nyocha nke na-akwado nke ahụ etinyere ihe ndị ahụ na mkpokọta nke milliseconds 10.
N'ihi ọrụ nke ndị na-agbazi trajectory, Voyager 1 ga-enwe ike ịga n'ihu maka afọ 2-3 ọzọ
Dị ka egosiri Todd akpụ isi, otu n'ime ndị injinia ka na-arụ ọrụ NASA a, oge ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ya na ndị ọrụ ibe ya niile kemgbe, afọ gara aga, Voyager 1 na-adabere n'ụzọ doro anya na ndị isi ya na nhazi ya ma nwee ike ịga n'ihu na-ekwurịta okwu na Earthwa. Mgbe afọ ndị a niile gasịrị, dị ka ezi uche dị na ya na nke a ga-atụ anya ya, injin ndị a enwekwaghị arụmọrụ.
Ekele maka ịmalite nke ndị na-agba ọsọ trajectory, nke ejibeghị ihe karịrị afọ 37, kpọmkwem kpọmkwem mgbe nyocha ahụ ruru Saturn, ọ ga-enweta gbatị ndụ Voyager 1 site na afọ abụọ ruo atọ tupu igwe ọkụ ọkụ eletrik ya na-enweghịzi ike iwepụta ikike zuru oke maka nyocha iji gaa n'ihu ọrụ ohere ya.
Ozi ndi ozo: Ars Technica
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Mgbe afọ 37 nke arụghị ọrụ gasịrị, NASA jisiri ike gbaa ndị ọkpọ Voyager 1
Jiri uru Lightinthebox a nyere maka ịzụ ahịa Ekeresimesi